Bay nke Bengal: njirimara, akụkọ ihe mere eme na Andamanese | Network Meteorology
Gulfs nke bengal
Taa, anyị na-agagharị n’Oké Osimiri India, kpọm kwem ga n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ. Nke a bụ osimiri bengal, a makwaara dị ka Bay nke Bengal. Ọdịdị ya dị ka nke triangle ma dị n'akụkụ ugwu site na steeti West Bengal na Bangladesh, n'ebe ndịda site na Sri Lanka Island na mpaghara India nke Andaman na Nicobara Islands, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ site na Malay Peninsula na na N'ebe ọdịda anyanwụ ya site na mpaghara ụfọdụ nke India. Ọ bụ sọsọ nwere akụkọ pụrụ iche nke mere ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ.
Ya mere, n'isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na akụkọ ihe mere eme nke Ọwara Bengal.
2 Akụkọ banyere Ọwara Bengal
3 Ansmụ mmadụ na Bay nke Bengal
4 Ọmụmụ ọnụọgụgụ
O nwere ngụkọta nke ma ọ dịkarịa ala ihe dị ka nde kilomita abụọ. Ọ dị mkpa ịmata na ọtụtụ osimiri na-asọ site na mmiri a nke buru ibu. N'ime osimiri ndị a, Osimiri Ganges pụtara dị ka nnukwu osimiri dị nsọ nke India. Ọ bụkwa otu n’ime osimiri ndị kasị ukwuu n’Eshia. Osimiri ọzọ na-asọba n'olulu a bụ Osimiri Brahmaputra a maara dị ka Tsangpo-Brahmaputra. Osimiri abụọ ahụ edebela nnukwu mmiri nke na-eme ka nnukwu onye na-agba ume na-abata na mmiri.
A na-awakpo mpaghara Bay nke Bengal mgbe niile site na monsoons ma n'oge oyi ma ọ bụ n'oge ọkọchị. Mmetụta nke ihe ahụ na-akpata na enwere ike ịnwe ikuku, ebili mmiri, ifufe siri ike na ọbụna ajọ ifufe n'oge oge mgbụsị akwụkwọ. Enwekwara ụfọdụ ihe okike sitere na mgbanwe nke ihu igwe na mmiri ya. Nyere ọnọdụ ya, mmiri nke Bay of Bengal nwere ọnụ ọgụgụ mgbe niile nke ụgbọ mmiri. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ụzọ azụmahịa dị mkpa nwere nnukwu mmasị akụ na ụba.
Ọ bụghị naanị na ọ nwere mmasị na akụ na ụba n'ịrụ ọrụ mmiri dị ka ịkọ azụ, mana o nwekwara ọtụtụ ihe na-akpali mmasị. Ubu mmiri ndị osimiri na-ebu bụ ihe na-edozi ahụ nke phytoplankton na zooplankton na-eri.. N'ikpere mmiri nke Bengal anyị hụrụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị mkpa dị ka Calcutta, nke a bụ ihe kachasị mkpa maka inwe azụmaahịa na ego.
A na-emepụta nri, ngwaahịa kemịkal, ihe eletriki, textiles na njem n'ụsọ mmiri a. Usoro ihe omume niile a na-eme ka nnukwu akụ na ụba dị mkpa. M ga-abụ ihe anyị na-ahụ na akụkọ ihe mere eme na anyị nwere ike ịhụ na ebe a tụrụ bọmbụ ndị Japan n'oge Agha IIwa nke Abụọ maka ebe a na-ewere dị ka ebe akụkọ ihe mere eme.
Akụkọ banyere Ọwara Bengal
Dịka anyị kwurula na mbụ, sọsọ mmiri a nwere akụkọ pụrụ iche nke mere ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ọ bụ ndị Portuguese chịrị ala ndị a na mbido. Otu n'ime ógbè ndị bụzi bụ Santo Tomé de Meliapor, taa ghọrọ mkpọmkpọ ebe nke obodo Madras na India. Na 1522 ndị Portuguese wuru ụka ma mgbe afọ ole na ole gachara, ha ewuworị obere obodo na saịtị ahụ. Site na ụkpụrụ nke oge ahụ, na narị afọ nke XNUMX, São Tomé bụ obodo, ọ bụ ezie na enweghị obi abụọ na ndị Europe rụrụ ọrụ dị mkpa na mmepe nke akụkọ ntolite nke mpaghara a.
Ha bụ ndị na-emewanye ihe omume nke ọdịbendị ndị gara aga karịa ndị bidoro ọhụụ ọhụrụ. Taa, ndị ọkachamara na-enyocha mmalite na akụkọ ihe mere eme nke mpaghara a dum kwenyere nke ahụ emetụtala na mpaghara a nke mmekọrịta azụmaahịa n'oge mbụ na ndị Europe. Ọtụtụ nnyocha egosiwo na ọnụ ọgụgụ ndị ahịa Asia na-ebubata ma na-ebupụ batrị site na Gulf of Bengal dị elu karịa nke ndị Europe. N'ime ngwa ahịa azụmaahịa anyị nwere silk na akwa ndị ọzọ.
Ansmụ mmadụ na Bay nke Bengal
Enwere ihe omimi nke jikọtara Bay Bengal na otu agbụrụ mebiri ọnụ ọgụgụ ya nke ukwuu. Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole fọdụrụ mana ọ bụghị n'ihi na ha anwụọla mana n'ihi na ndị agbata obi ha eweghachila ọtụtụ n'ime ha. Ọ bụ maka ụfọdụ ndị Andamanese nọgide na ọnọdụ ha dị ọcha ma bụrụ akụ maka sayensị. Ha bụ ndị Aborigine bi na Andaman na Nicobar Islands na Bay nke Bengal. Enwere ihe dịka 500-600 bụ ndị na-echekwa ọdịbendị ha n'ozuzu ya naanị n'ime ha naanị iri ise na-asụ asụsụ nna nna ha.
Ndi mmadu nke mmadu di ndu ka di ndu site na igbe na nchikota dika o mere na mmadu n'ime oge mbu, ha na-aga n'ihu ichu azu site na uta na àkú site na ugbo ha ma ha mara nka nke ite na igwe. Asụsụ ha enweghị sistemụ ọnụọgụ yabụ na ha ga-eji mkpụrụ okwu abụọ na-egosi ọnụọgụ: otu na ihe karịrị otu. Ha niile dị mkpụmkpụ ma gbaa ọchịchịrị na anụ karịa ndị bi na India gbara ya gburugburu.
Ihe omimi nke ndi a na Andaman na-emiwanye emi ma na-efesa n’otu oge. Enwere omumu ihe omumu banyere ihe banyere DNA na Neanderthal iberibe ihe na genomes. Ha ekpughewo ihe ịrịba ama nke obe oge ochie na onye ọzọ na-enweghị atụ na ndị a na-amaghị ama. Ihe a nile bu ihe omimi di nma nke naeme ndi mmadu a ka ha buru akwukwo. Ọmụmụ ihe ahụ mere ka ajụjụ ndị ọzọ doo anya banyere ụmụ mmadụ ndị a dị oke mkpa. Ma ọ bụ na ha dị iche na ndị ọzọ bi na South Asia ebe ọ bụ na ọtụtụ nyocha kwubiri na ndị a dị mkpụmkpụ na agba gbara ọchịchịrị sitere na mpụga nke Eshia. Afrika di iche na nke ozo site na nke uwa ozo mere kariri puku afo ise gara aga.
Mgbe e mesịrị n'ọmụmụ ihe ndị ọzọ na-egosi na nke a abụghị ikpe. Agba dị otu ihe ahụ anyị niile nwere mgbe anyị hapụrụ Africa gaa ụwa niile. Ọ na-akọwakwa na ogologo ya dị mkpụmkpụ bụ ngwaahịa nke a usoro siri ike nke nhọrọ ahịhịa dịka o mere na ụdị agwaetiti ndị ọzọ. N'ime usoro okike nke otutu njupụta nke osisi adịghị adaba ka ọ dị elu ebe ọ bụ na ọ dị mgbagwoju anya karị na n'ikpeazụ ha na-enwe nsogbu nke nkwekọrịta na alaka.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Bay nke Bengal na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gulfs nke bengal